Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/05/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/05/2018
Myanmar objects to Bangladesh on illegal border occupants
Naypyitaw, May 21
Myanmar officially filed an objection to Bangladesh on the increased number of illegal occupants near the border at the battalion commander-level meeting on 16 May in Taungpyo Letwe in Maungtaw Township and also urged the Bangladeshi side to prevent infiltration of ARSA terrorists. Occupancy near the border is prohibited by the bilateral border agreement.
The Bangladeshi side said that they had not provided assistance to the occupants living near the border line since the 2017 conflict, and they wanted to cooperate with Myanmar in solving the infrastructure being built near the international border line. The Bangladesh side also said that human habitation exists due to the support of international donors and organizations under the humanitarian aid programme. The two sides also discussed stability at the border areas.
Myanmar-Bangladesh conduct coordinated patrolling
The Myanmar Border Police and Bangladesh Border Police forces conducted coordinated patrolling along the respective sides of the border.
The security forces conducted coordinated patrolling from border post 46 to 47 on 14 May, from border post 47 to 48 and border post 38 to 39 on 16 May, from border post 48 to 49 on 17 May, from border post 49 to 50 and border post 39 to 40 on 20 May. Coordinated patrols along the land border were conducted 14 times in February, seven times in March and 15 times in May, totaling 36 times. Coordinated patrols along the Naf River were conducted four times, it is learnt.
Independent media group including foreign journalists arrives in Sittway IDP camps
Sittway, May 21
An independent media group including foreign journalists arrived in Sittway Airport on 21 May.
The media group included journalists and reporters from Tokyo Shinbum, TV Asahi, Nikkei Shinbum, Yunnan, Xinhua, Guangming Daily, CRI, Myanmar Time, Financial Time, ARD (German TV), RFI (Radio France International), and Belgial Newspaper.
နယ်စပ်မျဉ်းအနီး နေထိုင်သူများကိစ္စ မြန်မာဘက်မှ တရားဝင်ကန့်ကွက်
နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မျဉ်းအနီး နေထိုင်ခွင့်မရှိသောနေရာတွင် လူဦးရေ၊ အိမ်ထောင်စုများ တရားမဝင် တိုးပွားလာမှုကို သတင်းဖလှယ်မှုမရှိခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချုပ်ဆိုထားသော နယ်နိမိတ် စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ တရားဝင် ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ ရောနှောဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသဖြင့် ကာကွယ်တားဆီးပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မေ ၁၆ ရက်က မြန်မာဘက်ခြမ်း (တောင်ပြို-ဝဲ ဝင်ထွက်) တံတားအနီးရှိ ရှင်းလင်းဆောင်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံတပ် ရင်းမှူးအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီး ပြောင်းရွှေ့ဒုက္ခသည်များ ယခုအချိန်အထိ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီးတွင် နေထိုင် လျက်ရှိကာ ၎င်းတို့ဘက်မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့မှုများ မရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး အဆောက်အအုံနှင့်ပတ်သက်၍ နယ်စပ်ရေးရာကိစ္စဖြစ်သဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမှုများ အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနေဖြင့် ကန့်ကွက်၍ မရပါကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ လှည့်ကင်းများ ဆောင်ရွက်
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ကင်းစခန်းမှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း၍ မြေပြင်လှည့်ကင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နှစ်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မေ ၁၄ ရက်တွင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၆ မှ ၄၇ အထိ လည်းကောင်း၊ မေ ၁၆ ရက်တွင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၇ မှ ၄၈ အထိနှင့်၃၈ မှ ၃၉ အထိ လည်းကောင်း၊ မေ ၁၇ ရက်တွင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၈ မှ ၄၉ အထိလည်းကောင်း၊ မေ ၂၀ ရက် တွင် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၄၉ မှ ၅၀ အထိ နှင့် ၃၉ မှ ၄၀ အထိလည်းကောင်း မြေပြင်လှည့်ကင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်တွင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းချက်အရ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၁၄ ကြိမ်၊ မတ်လတွင် ၇ ကြိမ်၊ မေလတွင် ၁၅ ကြိမ် စုစုပေါင်း ၃၆ ကြိမ်နှင့် နတ်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း ရေကြောင်းကင်းလှည့်ခြင်းကို စုစုပေါင်း ၄ ကြိမ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများပါဝင်သော သတင်းအဖွဲ့များ စစ်တွေမြို့ရှိ IDP စခန်းသို့ ရောက်ရှိ
စစ်တွေ မေ ၂၁
ပြည်ပသတင်းမီဒီယာများ ပါဝင်သည့် သတင်းအဖွဲ့သည် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
အဆိုပါ သတင်းအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် သိရှိလိုသည်များ မြေပြင် ကွင်းဆင်းသတင်းရယူမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့ရှိ သက္ကယ်ပြင် IDP စခန်းသို့ သွားရောက် သတင်းရယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွင် Tokyo Shinbum ၊ TV Asahi ၊ Nikkei Shinbum ၊ Yunnan ၊ Xinhua ၊ Guangming Daily၊ CRI ၊ Myanmar Time၊ Financial Times ၊ ARD (German TV)၊ RFI ( Radio France International ) နှင့် Belgial Newspaper စသည့် သတင်းဌာနမှ သတင်း မီဒီယာများ ပါဝင်ကြသည်။